Izindaba Zakamuva Zohwebo Lwamazwe Ngamazwe - Alietc.com
April 3, 2021 0 amazwana
UXi'an Ukulandela Impumelelo Ka Shenzhen
Ukuzimela kweChina kwezobuchwepheshe ezinhlelweni zayo zentuthuko kuveza inhloso yayo: ukunweba ezindaweni zobuchwepheshe bemingcele. Ngemuva kokuthola impumelelo kwezobuchwepheshe ngeHuawei yasekhaya kanye neTencent Holdings, uShenzhen ube yisibonelo emadolobheni afana neXi'an. IXi'an, idolobha elikhulu elikhulayo ngo-2020, selithathe izinyathelo eziqinile zokuthuthukisa intuthuko ku-semiconductor […]Funda kabanzi
Mashi 17, 2021 0 amazwana
Ukukhula Kwezomnotho Okuphansi eGulf Area kuya Kumabhange Okuphazamisa
Mashi 16, 2021 0 amazwana
I-GE Healthcare Yethula iVscan Air
Mashi 15, 2021 0 amazwana
I-Xiaomi Yabelana Ngokunyuka ngaphezulu kwe-10% Njengoba iJaji laseMelika Liphakamisa Imikhawulo
Amasheya kaXiaomi abone ukweqa ngoMashi 25 njengoba ijaji laseMelika lisuse okwesikhashana imikhawulo ebekwe owayengumongameli uDonald Trump. Ijaji lesifunda saseMelika uRudolph Contreras ususe ukuvinjelwa okwakhishwa ngabaphathi bakaTrump. Uthe inkampani yaseChina izoshaywa ngesando uma izinsiza zisala ngaphandle. Abukho ubufakazi bokuthi uXiaomi […]Funda kabanzi
Mashi 14, 2021 0 amazwana
I-Virgin Airline Ikhulisa Imali
Ihlushwe yilo bhubhane, iVirgin Atlantic Airways ihlela ukukhulisa u- £ 160 million, ngokusho kokhulumela inkampani yezindiza iRichard Branson. I-airway iqhubeka nokukhulisa isimo sayo sezezimali, esho, engeza ukuthi imali esanda kwenziwa (ama-dollar ayizigidi ezingama-160) iyinsizakalo enhle ngo-2021 njengoba ukululama kusahamba kancane. Ukuthengiswa kabusha kwebhizinisi lamaBoeing 787 amabili ngenyanga […]Funda kabanzi
Mashi 13, 2021 0 amazwana
Thatha ku-Talks with SPACs
Inkampani yokubamba abagibeli iGrab ixoxisana nenkampani ethola izinjongo ezikhethekile yase-US (i-SPAC) ukuphumela obala. Isivumelwano sokuhlangana sinenani eliphakathi kwama- $ 35 billion kanye nama- $ 40 billion, okwenziwe kakhulu kunakho konke. IGrab Holdings Inc ixoxisane ne-Altimeter Capital Management, esekela ama-SPAC amabili. Mayelana nalokhu, umbiko omusha uthe uGrab uyaxoxisana […]Funda kabanzi
Mashi 12, 2021 0 amazwana
I-India Yethula Ukukhiqizwa Kwe-Green Hydrogen
Uhlelo lwe-hydrogen oluhlaza lwaseNdiya kuvunyelwene ngalo yiFusion Fuel Green neBGR Energy Systems. Bazosungula izindawo ezihlobene eTamil Nadu, izwe eliseningizimu neNdiya, kulo nyaka. Inhloso ukunweba uhlelo lwe-hydrogen eluhlaza ezweni. IFusion Fuel Green, enamahhovisi ePortugal nase-Ireland, izohlinzeka ngesitshalo seTamil Nadu […]Funda kabanzi
Mashi 9, 2021 0 amazwana
Target Ukuze Qalisa Izintandokazi Zosuku Lwezintandokazi
I-Target Corporation isizoqala umkhiqizo omusha kungekudala. Usuku oluthiwa Intandokazi, ulayini wesiphuzo wokudla neziphuzo uzonikela ngezinto ezahlukahlukene zokudla, ukudla okungaphezulu kwama-700 kokunikezwa neziphuzo. Zisukela kokhilimu beqhwa kuya ezinkweni, amakhekhe, iziphuzo nokunye okuningi. Inkampani yaseMelika edayisa impahla izama ukuheha amakhasimende okuthi […]Funda kabanzi
Mashi 8, 2021 0 amazwana
Abasebenzi BaseJapane Abesifazane Beats US naseYurophu
Abasebenzi besifazane baseJapan bakhuphukile, bedlula i-Europe kanye ne-US ngamaphesenti, ngokusho kukaKathy Matsui, owayeyisekela likasihlalo kanye nosomaqhinga omkhulu waseJapan webhange lotshalo-mali lomhlaba wonke uGoldman Sachs. “I-Womenomics”, igama elakhiwe nguye, lamukelwa nguShinzo Abe, uNdunankulu owayedumile, owathatha izinyathelo zokuvumela abesifazane ukuthi bathathe […]Funda kabanzi
Mashi 7, 2021 0 amazwana
Iqembu laseMalaysia i-AirAsia Lizokwethula Ukulethwa Kwedrone
Ngenkathi inkampani yezindiza ebiza kancane ibukeka inweba ngesikhathi salo bhubhane, i-AirAsia Group Bhd yaseMalaysia ihlose ukwethula itekisi lomoya kanye nensizakalo yokuqala yokulethwa kwezindiza. Olunye uhlelo lwayo ukuqala imboni yokugibela abagibeli ngo-Ephreli ukuze kube lula ukuhamba. UTony Fernandes, isikhulu seqembu, uthe itekisi lomoya elinomshayeli wendiza lithwala […]Funda kabanzi
I-Agri & Imishini Yokucubungula Ukudla Nemishini
Iziphuzo Ezidakayo, Ugwayi Nemikhiqizo Ehlobene
Okokufaka epulazini - Umanyolo, izibulala-zinambuzane nembewu
Imikhiqizo Yepulazi - Izinhlamvu, Izithelo njll
Imikhiqizo Yezinhlanzi Nezinhlanzi
Izipho Nemisebenzi Yezandla
Imithwalo Yezikhwama Namacala
Izimpahla zeHhovisi Nezikole
Ukupakisha & Ukuphrinta
Ukudla Okucutshungulwayo Neziphuzo Imikhiqizo Nemikhiqizo
Umkhiqizo Wezindwangu & Wesikhumba
Ama-eyewear amajwashi wamehlo
Amathuluzi & Hardware
Amathoyizi nezinto zokuzilibazisa
Ama-Trade Fairs kanye neMibukiso
I-Agri & Imishini Yokucubungula Ukudla Nemishini Imishini Yezolimo Nemishini Iziphuzo Ezidakayo, Ugwayi Nemikhiqizo Ehlobene Isembatho Imisebenzi yokuKwakha i-Apparel Izingxenye ezizenzakalelayo nezesekeli Ubuhle nokunakekelwa komuntu siqu iziPhuzo amakhemikhali Ukwakhiwa Nezezakhiwo I-Electronic Consumer Izisetshenziswa Zikagesi Nokunikezwayo Energy Ubunjiniyela Nemishini Yokwakha Okokufaka epulazini - Umanyolo, izibulala-zinambuzane nembewu Imikhiqizo Yepulazi - Izithelo, Izithelo njll Imikhiqizo Yezinhlanzi Nezinhlanzi Ukudla Nezolimo Imishini Yokudla Nesiphuzo Ifenisha Izipho Nemisebenzi Yezandla Ezempilo Nezokwelapha Ukwengezwa Kwezempilo Ikhaya nengadi Ukusebenza Kwekhaya Ukulima - Izimbali, Izitshalo nemikhiqizo ehlobene Izinsana Nezingubo Zokugqoka Imfuyo, Izinkukhu, Inyama Nemikhiqizo Yezilwane Imithwalo Yezikhwama Namacala imishini Izambatho Zabantu Amaminerali Nensimbi Izimpahla zeHhovisi Nezikole Iminye imikhiqizo yemvelo Eminye Imishini Yezimboni Nemishini Ukupakisha & Ukuphrinta Ukudla Okucutshungulwayo Neziphuzo Imikhiqizo Nemikhiqizo Injoloba namaPlastiki Ukuphepha nokuvikelwa Ukunakekelwa kwesikhumba Ezemidlalo nokuzijabulisa Umkhiqizo Wezindwangu & Wesikhumba Ama-eyewear amajwashi wamehlo Amathuluzi & Hardware Izimoto Nezinsiza